Mila fanampiana amin'ny fandaminana ny fitsidihanao? Zahao ireo zotram-piaramanidina sy mpitari-dalana namboarina ary mahazoa hevitra ho an'ny traikefa Kildare tonga lafatra ho anao!
Na mpanao voalohany ianao na eo an-toerana mitady hamantatra indray ny majika an'i Kildare dia manana sosokevitra vitsivitsy momba ny fomba hankalazanao ny fotoanao any amin'ny Thoroughbred County. Tadiavo ny zava-drehetra avy amin'ny ivelan'ny trano mandeha sy vatosoa miafina, amin'ny tsara indrindra odiambavafo safidy ary fiantsenana teboka. Na inona na inona tombotsoanao na teti-bolanao, manana hevitra izahay ho an'ny traikefa tsy azo hadinoinao Kildare.
fianakaviana mpivady Ireo tia ny tantara Mpitady Adventure Amin'ny teti-bola Vatosoa miafina Mpankafy any ivelany County Thoroughbred Shopaholics Fitsidihana voalohany Zavatra tokony hatao Food & Drink zavatra ilaina Torohevitra eo an-toerana Krismasy Atsinanana Fahiny any Irlandy
Sakafo tsara, orinasa tsara: Safidy sakafo matsiro Kildare mifanaraka amin'ny fotoan'ny fianakaviana rehetra
Toerana mahafinaritra sy fitsidihana any Kildare izay ho tian'ny ankizy
Zavatra 10 tokony hatao ao Kildare amin'ny Culture Night 2021
Manomboka amin'ny Lockdown ka hatrany Tinseltown
Top 5 zavatra tokony hatao any Kildare ho an'ny fianakaviana
1 2 3 4 Manaraka